Marketing Archives - Business Centric Network (BCN)
Accounting, Digital Accountant, Job, Marketing
BCNEA မှ တဆင့် အမြန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။ 1) Senior Accountant (Hlaingtharyar) 2) Customer Service Supervisor(Kyimyintdine) 3) Application Consultant for Accounting Software(South Okkalapa) 4) Operation Executive (North Okkalapa) 5) Customer Service Staff(Kyimyintdine) 6) ASP.net Developer(yankin) အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါသည်။ https://businesscentricnetwork.com/jobs/ cv ကို [email protected] viber: 09 977 160 675 သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ *** BCNEA မှ တဆငျ့ အမွနျလြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ ဝနျဆောငျခပေးရနျမလိုပါ။ 1) Senior Accountant (Hlaingtharyar)… Continue reading Job Posts
Digital Marketing ဆိုတာဘာလဲ?
August 29, 2018 August 28, 2018 San Thida
Digital Marketing ဆိုတာဘာလဲ? Internet အသုံးများပြားလာမှုနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီတိုင်း၊လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် Websites များနှင့် Social Media Page များရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းများအပြင် Onlineအသုံးပြု၍ ဈေးကွက်ရရှိအောင်လည်း ပြုလုပ်လာကြသည်။ ထိုသို့ Online အသုံးပြုဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းကို Digital Marketing ဟုခေါ်သည်။ Digital Marketing ပညာရပ်တွင် -Content Marketing -Social Media Marketing -E-mail Marketing -Mobile Marketing -Affiliate Marketing -Search Engine Marketing (SEM) -Search Engine Optimisation(SEO) -Display Advertising -Analytics တို့ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင် Digital Marketingတွင် Planningနှင့်Web presience များကိုလည်း လေ့လာသိရှိထားရမည်… Continue reading Digital Marketing ဆိုတာဘာလဲ?
Buyer’s Five-Step Adoption Process
June 26, 2018 June 25, 2018 San Thida
Awareness - Customers are aware you exist, but don’t know what it is you do or sell Interest - Customers have now heard of you and because of what they see, they want to learn more Evaluation - Customers are now decided whether to give youashot or not Trial - Customers are willing… Continue reading Buyer’s Five-Step Adoption Process
Tagged BuyerLeaveacomment
June 23, 2018 San Thida
BCNEA ကတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်မည့် Sales and Marketing Position များပါ။ အတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက် ရာထူးများလဲ ပါသလို့ အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်လဲ ပါပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Link မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ (၁၀) ရက်အတွင်းမှာ စိစစ်ပြီး လူတွေ့ရွေးချယ်ခံရသူများကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်ခ လုံးဝ၊လုံးဝ ပေးစရာမလိုပါ။ အခုပဲ လျှောက်ထားလိုက်ပါ။ ပုံ(သို့) link ကိုနှိပ်ပါ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များထည့်သွင်းပြီး CV နှင့်တကွလျှောက်ထားပါ။ File Size: up to2MB File Type: PDF or words *** BCNEA ကတဆငျ့ လြှောကျထားနိုငျမညျ့ Sales and Marketing Position မြားပါ။ အတှအေ့ကွုံမရှိသူမြားအတှကျ… Continue reading Sales and Marketing Jobs
Business, Marketing, SME
Marketing Management or Marketing Plan
MBA ဘွဲ့ရ လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် သင်မှာပါ။သင်တန်းကြေးကလဲ တန်မှတန် ၅၀၀၀၀ ပဲနော်။Marketing သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်။အချိန်လည်း အများကြီးမပေးနိုင်ဘူး။သင်တန်းကြေးကလဲ သင့်တင့်တယ်။သွားရေးလာရေးလဲ အဆင်ပြေမည့်နေရာမျိုး၊မြန်မာလိုသင်ပြီး စာတွေ့၊လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Business Centric Network ကဖွင့်မည့် Marketing Plan သင်တန်းလေးတက်ဖို့ အခုပဲစာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ သင်တန်းရက် ဇွန်လ(၁၆) နဲ့ (၁၇)၊ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ သင်တန်းခန်းမ Castle Business Skills Training Center အမှတ်(၁၅၂)၊ပါရမီလမ်းမ၊ပါရမီညောင်ပင်မှတ်တိုင် ဆက်သွယ်စာရင်းပေးရန် ၀၉၄၂၄၂၅၀၇၂၁ လူဦးရေကန့်သတ်ထားပါတယ်။ သင်ကြားမည့်အကြောင်းအရာများ Definition of Marketing Market Research Segmentation Targeting Positioning Marketing Mix (7Ps) SWOT Analysis Pricing Strategies Promotion Strategies Impact… Continue reading Marketing Management or Marketing Plan
Finding the Sweet Spot of Competitive Positioning The sweet spot of competitive positioning ensures your brand is relevant to the target audience and differentiated from the competition. This article from Sawtooth Technologies pinpoints ways to position your brand, particularly in the business-to-business market. Where shouldabrand be positioned? Although this isastraightforward marketing… Continue reading Finding the Sweet Spot of Competitive Positioning
Tagged competition, strategicLeaveacomment